Brazil Oo Si Ciriiri Ah Ugu Soo Gudubtay Semi-finalka, Iyo Britian Oo Laga Reebay Tartanka K/Cagta Olimbikada. - jornalizem
Brazil Oo Si Ciriiri Ah Ugu Soo Gudubtay Semi-finalka, Iyo Britian Oo Laga Reebay Tartanka K/Cagta Olimbikada.
Xulka ugu cadcad inuu qaato bilada dahabka Brazil ayaa labo jeer oo hogaanka laga qabtay waxa ay 3-2 ku garaaceen xulka Honduras iyadoo semi-finalka ciyaaraha Olimbikada wajihi doona xulka South Korea kuwaasoo rigoorayaal ku soo reebay martigeliyayaasha Great Britian.
Mexico ayaa wajihi doonta semi-finalka kale ka dib makii ay 4-2 ku garaaceen xulka Senegal, halka Japan ay 3-0 kaga badisay Masar.
South Korea ayaa la ciyaari doonra Brazil habeenka talaadada ciyaar ka dhaceysa Old Trafford, halka Japan ay isla habeenkaas Wembley kula ciyaari doonto Mexico.
Ka dib mid ka mid ah habeenadii ugu fiicnaa ee tariikhda Olimbikada Britian oo ay ku guuleysteen lix biladood oo dahab ah, xulka kubada cagta Britian waxa ay doonayeen inay iyagana sameeyaan taariikhdooda u gaarka ah oo ay u soo baxaan semi-finalka markii ugu horeysay tan iyo 1948dii.
Kulankii ay la ciyaareen South Korea ayaa ku dhamaaday 1-1 ka dib markii Aaron Ramsey uu rigoore dhaliyay daqiiqadii 36aad mid kalena laga badbaadiyay seddex daqiiqdo ka dib, iyadoo Ji Dong-Won uu hogaanka u dhiibay Korea daqiiqadii 29aad. 90 kii daqiiqo ee ciyaarta ayaa 1-1 ku dhamaatay iyo 30 kii daqiiqo ee lagu daray, waxaana la isla aaday gool ku laad.
Ka dib markii labada kooxood ay dhaliyeen afartii gool ku laad ee ugu horeysay, Daniel Sturridge ayaa laga badbaadiyay rigoore daciif ah, halka Ki Sung- Yeung uu rigooradii guusha dhaliyay, iyagoo ku badiyay 5-4.
Brazil, oo ceyrsaneysa biladii dahab ee kubada cagta ee ugu horeysay ayaa labo jeer goolal looga hormaray, waxaana labada jeerba u barbareeyay Leandro Damiao iyo Neymar, iyadoo casaan uu qeybtii hore ka qaatay Honduras Wilmer Crisanto.
Damiao ayaa hadana goolka guusha dhaliyay taasoo u sahashay inay Brazil 3-2 ku badiso.